Shandong Yikuang Drilling na Mining Technology Co., Ltd.
Shandong Yikuang Drilling na Mining Technology Co., Ltd. dị na Linqing City, obodo ama ama na Beijing-Hangzhou Grand Canal oge ochie na obodo mepere emepe dị mkpa na Shandong Province, ọ dịkwa na Xintai Industrial Park, Dongwai First Ring Road. Companylọ ọrụ ahụ nwere isi obodo ndebanye aha nke nde yuan 23, ụlọ ọrụ ahụ na -ekpuchikwa mpaghara mita 25,000. Ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na-ejikọ mmepe teknụzụ na nrụpụta akụrụngwa, ahịa na ọrụ teknụzụ n'ọhịa nke igwu ala, igwupụta coal, njikọ injinịa, njikwa gas na uzuzu.
Kemgbe e hiwere ya, ụlọ ọrụ ahụ etinyela aka na mmepe, nkwalite na itinye ntinye nke igwu ala, igwu ala, ịwụnye na akụrụngwa n'ime ebe a na -egwupụta coal, ebe a na -egwupụta ihe, ihe owuwu na ọrụ nchekwa mmiri, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ, ọwara mmiri na àkwà mmiri. Na 2018, "Liaocheng Industrial and Mining Safety Drilling Tool Engineering Technology Research Center" biri ebe a wee gafere asambodo "High-tech Enterprise". Companylọ ọrụ ahụ eguzobela mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na ọtụtụ ụlọ ọrụ nyocha sayensị na ụlọ ọrụ akụrụngwa. Kemgbe afọ 2019, ụlọ ọrụ ahụ enyochala echiche ọhụrụ maka imekọ ihe ọnụ ụlọ ọrụ mahadum ma nwee otu nwere ihe karịrị 40 nkà sayensị na teknụzụ dị elu nke ndị gụrụ akwụkwọ, ndị prọfesọ, ndị prọfesọ na-akpakọrịta, ndị dọkịta na ndị nna ukwu.
Ụlọ ọrụ ahụ siri ike ma na -elebara nyocha teknụzụ na mmepe ya anya.
Ụlọ ọrụ ahụ siri ike ma na -elebara nyocha teknụzụ na mmepe ya anya. Ngwaahịa ụlọ ọrụ ndị a bụ: usoro njigide ikuku pneumatic, usoro pneumatic drilling rig, usoro hydraulic zuru oke, usoro hydraulic drilling rig usoro, usoro ihe mgbochi uzuzu, usoro akụrụngwa mkpọtụ nkume na nyocha ala, ọkpọkọ maka igwu ala nke coal. diamond ibe n'ibe, họpụta, ala-na-aku ibe n'ibe, pneumatic malite ịgba ibe n'ibe, coal nkume malite ịgba ibe n'ibe na azu ngwá ọrụ na ndị ọzọ na usoro nke na-akwado ngwaahịa. N'ime ha, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara usoro mgbochi mkpọchi mkpọchi mkpọchi na ọkpọkọ ọkpọ zuru oke nke akụrụngwa maka igwu ala, nke na-edozi nsogbu nke enweghị ike ịkụ ala n'okpuru ọnọdụ ala dị nro na ebe a na-egwupụta coal na ọrụ na-ejikọ ọnụ, wee jupụta oghere n'ahịa .
Teknụzụ Yikuang na-enye ndị ọrụ akụrụngwa akụrụngwa dị elu na-akwado ya na ngwaọrụ na-egwu ala.
N'okpuru ọnọdụ zuru oke nke ịbelata uru na ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ na ume na mkpa ngwa ngwa maka njikwa ọnụ ahịa, ịchekwa ike na mbelata oriri, teknụzụ Yikuang na-enye ndị ọrụ akụrụngwa akụrụngwa dị elu na ngwaọrụ na-akwado ya na ngwaọrụ mkpọpu ala. N'otu oge ahụ, ọ na -enye usoro mgbazinye onwe onye na nhazi nkeonwe, nke na -enye nkwado siri ike maka imirikiti ndị ọrụ ịchekwa ike na ibelata oriri ma belata ọnụ ahịa nrụpụta zuru oke. Yikuang Teknụzụ agabigala ma rụọ ọrụ asambodo sistemụ mma ISO9001-2015 yana sistemụ njikwa ERP nke ụlọ ọrụ ahụ. Enwere ọtụtụ ahịrị na -emepụta akpaka dịka ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ gburugburu, nhazi akụrụngwa, wdg, na -eji ngwa ụlọ na nke mba ọzọ na ngwa nhazi na akụrụngwa nnwale iji duru ezigbo ngwaahịa ahụ.
Ka ụwa ghọta Yimin, ka Yimin jeekwara ụwa ozi
Teknụzụ Yikuang na -agbaso ụkpụrụ "Mmepe ya na ndị ahịa, soro ndị ọrụ na -eto, ma kwalite mmekọrịta n'etiti ọha mmadụ". N'atụpụghị uche na-agbaso '' echiche azụmaahịa nke dabere na ntụkwasị obi, dabere na mmeri, wee tinye onwe ya na afọ ojuju ndị ahịa na ihe ịga nke ọma! Ka oge na -aga, ndị Yikuang na -ebugharị ebili mmiri, merie ihe mgbochi, jiri obi ike na -alụ ọgụ, wee na -aga n'ihu n'atụghị egwu. Jikọrọ ọnụ hazie isiakwụkwọ nke "Ka ụwa ghọta Yimin, ka Yimin jeere ụwa ozi"!